Ukuhalalisela ngeKrismesi ka-2018 yinto ehle kakhulu kwaye ehlekisayo kwindinyana kunye neprose: I-SMS emfutshane yeKrismesi ngokuvuyisana
Uhlobo, lufudumala kwaye luthintela ngeKhisimusi 2018 ukulungisa yonke into ukusuka kumncinci ukuya kumdala. Ngeli thuba leholide elihle, ebonakalisa iSimangaliso sikaThixo kunye nokuza kwihlabathi loMsindisi uKristu, izalamane kunye nabathandekayo, abahlobo, abaqhelana nabo, oogxa kunye nabamelwane bayabingelelwa ngeendlela ezilungileyo, ezivuyayo kwivesi kunye neprose. Iimpawu ezihle kakhulu kunye neemifanekiso eziphathekayo eziphathekayo zithunyelwa kwizihlobo kunye nabahlobo abahlala kwezinye iidolophu nakwamanye amazwe. Izibonakaliso zokuthabatha ingqalelo ziyangena entliziyweni kwaye zenze iimeko ezihle kwaye zenzondelelo.
Eyona nto imnandi kakhulu ngovuko lukaKristu 2018 - imizekelo yeetekisi kwiprose
Ubumnene, bechukumisa kunye novuyo kakhulu kwiKhisimusi 2018 inikezelwa kubazali, oomkhulu, oomkhulu kunye nezinye izihlobo ezindala. Kuba aba bantu bamnandi kakhulu, amazwi aphefumlelweyo kunye neengcinga ezilungileyo zikhethiweyo. Kwiimpawu ezifudumeleyo, ezihloniphekileyo, nditsho abantu ukuba inkwenkwezi yokuqala sele ivulile kwaye ivakalise ukuza kwiLizwe loMsindisi uluntu-uYesu Kristu. Ukongeza kwezi ntetho, izalamane zifuna impilo enamandla kunye nobomi obude, uxolo, uxolo kunye nokuchuma, ukuqonda kunye kunye nolonwabo lwentsapho olulula. Njengomthetho, ukuvuyiswa kuthiwa kubakho ngokwabo kwintlanganiso, kodwa ukuba akukho nto inokwenzeka, kwaye izalamane zikude, zikwaziswa ngefowuni okanye kwi-Skype. I-SMS kule meko ayifanelekanga. Ifomathi yabo iphela kwaye ayikwazi ukufumana inani elipheleleyo lamagama endifuna ukuthetha. Ukongezelela, kwanekisi ecacileyo, engenayo imibala yeemvakalelo zabantu, ilahlekelwe yintolongo yayo kwaye ibonakala ingabonakali. Ngoko ke, xa enye indlela ingabandakanywa, kubalulekile ukurekhoda umyalezo welizwi kwangaphambili kwaye uyithumele kwi-addressee ngexesha elifanelekileyo. Lo msebenzi ufumaneke nakwiifowuni ezilula kakhulu kwaye ikuvumela ukuba uthethe nabathandekayo kwimodi efanelekileyo.
Imibhalo kwiprosesi ukuhalalisela izihlobo ngeKrisimesi
Xa ubusuku beKrisimesi bhanya ngeenkwenkwezi, vumela ukuba umnqweno wakho oyintandokazi kwaye oyithandayo uyagcwaliseka. Vumela ikamva lilethe ukuqonda intsingiselo yobomi kunye nokuzaliseka kokonwaba! Yeka eli dlulileyo lize kuphela ngeememori eziqhakazileyo, kwaye okwangoku ihlala ivuya kwaye iphumelele!
Uvuyo lweKrismesi! Kwangathi le holide yomlingo igcwalise ubomi bakho ngokukhanya, ukufudumala, uvuyo kunye nenhlalakahle. Ndiyathanda ukuba uxolo, ububele, uthando, intuthuzelo yentsapho. Vumela ingelosi yomlondolozi ikukhusele kuzo zonke iingxaki neengxaki!
Siyavuyisela ngeKrisimesi! Vumela indlu yakho igcwale imfudumalo kunye nenduduzo. Konke kuzaliseka, nangona kuncinci, amaphupha. Iintliziyo zabathandekayo ziya kufudumala ngothando nokunyamekela. Abantu abajikelezileyo baya kuba nobubele novelwano. Inkwenkwezi yeKrisimesi ihlala ikhanyisa indlela!
Eyona mfutshane imincomelo ngomntu othandekayo okanye umhlobo onguKristu wokuzalwa kukaKristu 2018
Eyona mfutshane kakhulu iminconywa ngeKrismesi 2018 iqondiswa kumntu othandekayo okanye umhlobo osondeleyo. Iyakonwaba, ivesi zepestile ezintle, izibhalo ezilungileyo kwiprose okanye kwiintetho ezilula, ezilula ezithetha ngamazwi akho. Akukho mfundiso apha kwaye wonke umntu ukhululekile ukuzikhethela ngokwakhe ukuba ubingelela njani abantu abathandekayo entliziyweni. Siyakuvuyisana, kulungile ukuthetha ngomntu kwiintlanganiso ngeveki yeholide okanye ubhale ekhadini elihle leemathematika uze ulithumele ngeposi. Ifomathi ebhaliwe ithathwa njengesiqhelo, kodwa ke, ihlala idala iimvakalelo ezimnandi kakhulu. Ukuba ufuna ukubonisa ukuqala, kufuneka udubule ukuvuyiswa kwakho kwividiyo, sebenzisa abahleli abalula kwaye bafikeleleke kwi-intanethi ukudibanisa iziphumo ezikhethekileyo, uze uthumele i-mini-clip kwi-addressee. Indlela engavamile yokubulisa iya kubangela isiphepho sogcoba kwaye siyakhunjulwa ixesha elide ngokungaqhelekanga, ukunikezela kunye nokudala. Kulabo abangenabungane kakhulu neenkqubo zekhompyutheni, kukho ukhetho olulula, umzekelo, ukupakisha ikhadi lokubulisa kunye nokubhalisa kwimvulophu enhle kwaye isebenzise iinkonzo zeenqwelo eziza kuhambisa umyalezo ngokukhawuleza ngosuku olufunayo kunye neyure elithile. Uhlobo olunjalo luya kwenza umboniso ocacileyo kwaye aluyi kuvumela ukubingelelwa kwemikhosi ukulahleka phakathi kwezinye izibingelelo.
Imizekelo yeyona nto imfutshane kakhulu iminconywa ngabathandekayo kunye nabahlobo beKrismesi
Ubuqili kwakhona bume umhlaba, Imemori yeKrisimesi, ndiyakuvuyela namhlanje! Kwaye ebomini ndi nqwenela ukuhlangabeza ubuhle, ulonwabo, uvuyo, impumelelo kunye nobubele babantu! Kwaye amaphupha, ukuba ufihle kubahlobo kunye nezihlobo, Uzaliseka ngeli xesha lomkhosi, Emva koko, akukho nto ibaluleke kakhulu kwihlabathi! Kwangathi inkwenkwezi yeKrismesi ingalindela!
Ndikunqwenela wena ungcwele kulobu busuku, ukuba bonke baze bahlala bephumelele! Ngoko ukuba ebomini inkwenkwezi yakho ekhokelayo uLuck uye wahlala ebamba umlilo! Ngamana uThixo unokukhusela imini nobusuku ngamehlo enuyihlo omhle! Ukusuka ephantsi kwentliziyo yam ndiyakuvuyela ngokukhawuleza ngeKrisimesi kunye noKristu!
Siyavuyisela ngeKrisimesi! Kule holide eqaqambileyo, ndinqwenela uxolo nolungileyo, uthando nolonwabo, ukuchuma, impumelelo kunye nempilo enhle. Vumela ingelosi yomlondolozi ikhusele wena kunye nabathandekayo bakho kuzo zonke izifo, kwaye emphefumlweni wakho ukholo, uxolo nothando luya kulawula. Ngeholide ekhawuleza iKrisimesi!
Irismesi ifike ngokukhawuleza, Ukuthula kunye nokuphumla okumnandi, Ngaba lo nyaka, ndiyazi, uphumelele, Kuya kuba novuyo ukuqhutyelwa ngumlambo. Akukho sityholo, akukho buhlungu, akukho ntlungu, Isinyathelo esitsha kulo mbuzo siqala, Wonke umntu ufuna ukuba intaka kwintlango, Ekude ekubukeni izibane.
Imibulelo emihle kunye neendumiso kwivesi ngeKhisimusi 2018
Iimbuliso ezintle kunye neengoma zemiyalezo kwiindinyana ngeKrisimesi 2018 zilungele ukukhuleka. Bakho konke: ukuzukiswa kommangaliso oyingcwele, uvuyo lokuza kwiLizwe loMsindisi, kunye nentsikelelo yexesha elizayo elonwabileyo kunye nolonwabo olusondeleyo lwezihlobo, abahlobo kunye nabaziwayo. Ukuva okanye ukufunda la mazwi, umntu uvakalelwa ukuvuselela ngokomoya kwaye intliziyo iya kukhanya kwaye ifudumele. Ngelizwi lokubhaliweyo ngokukhawuleza iinkondlo ze-krismesi zingabakho kwiinkampani ezinobungane, zihlanganisene kunye ukugubha ezinye izinto ezikhutheleyo kuzo zonke iholide, kodwa izandi eziqhaqhaqhaqhaqho kakhulu kunye nemibala emibalayo ziya kuvakala etafileni apho intsapho yonke ibuthana khona kwisidlo esinomdla. Ukuba enye yezihlobo zeso sizathu asikwazi ukuza kudla, ukufunda iimbongo zingathathwa kwividiyo usebenzisa i-tablet okanye i-smartphone, uze ubonise okanye uthumele ngokukhawuleza nge-Internet ukuba ungabikho. Ukubona le filimu encinane, ilungu lentsapho liza kuziva ulwalamano lwabo ngokupheleleyo kwaye luya kuvuya ukubona indlela abonwabile ngayo iholide evulekileyo yoKuzalwa kukaKristu.
Imizekelo yeendinyana ezintle zokubingelelwa ngoKuzalwa kukaKristu
Hlonipha iKrismesi, vuyisana! Ukukhanya emphefumlweni kwaye ndiyathanda ndinqwenela. Yenza intliziyo entle kwisifuba sakho ibethe kunye nomhlobo othembekileyo ebomini apho. Umoya makomelele, ubomi obonwabileyo. Impumelelo endlwini yakho iya kubhabhisa intaka yakho, kwaye ulonwabo luya kuvuya ngokukhanya kunye nawe awuyi kuhlala olunye usuku.
Ihlabathi laba nomnene ngakumbi kwaye lichanekile xa inkwenkwezi ikhanya phezu kwayo. Ukususela ngelo xesha, ukukhanya kwenkwenkwezi engcwele kuye kwasenza sibe nethemba noxolo oluvela ezulwini, kwaye lukholisa abantwana ngezipho kunye namaphupha, kunye nemilingo yangempela! Asiyedwa - uthando kunye nokholo nathi! Inhlanhla, uvuyo, inhlanhla, iHerry Christmas!
Iholide eyingcwele iKrismesi! Ndifuna ukuvuyisana nawe. Yaye uxolo, uthando kunye noyoliso Makufumane imindeni yakho! Iholide elihle, eliqaqambileyo mayiyekezelele zonke iintlungu zakho. Ungavumeli ukubuhlungu emphefumlweni wakho, kwaye kuya kuzaliseka, oko uphuphayo!
Siyavuyisela-imifanekiso kunye neengkondlo zeKrismesi 2018
Imibala ekhanyayo, eneembala kunye neendinyana kunye nokuvuyiswa ngokuhlonipha uKuzalwa kukaKrestu-into elula kakhulu kunye neyona nto ifanelekileyo yokubulisa. Banokukhishwa ngaphandle kwentlawulo kwiwebsite yethu, kwaye bathunyelwe nge-intanethi kwizihlobo, abahlobo, oogxa kunye nabahlobo, okanye abashicilelwe kumshicileli, basayinwe ngesandla kunye neveki yeholide ukuba banikele umboniso omnandi kubo bonke abafuna ukukholisa. Imifanekiso ngeenkomfa zeKhisimesi zifanelekile ukuba zisetyenziswe njengento yendawo yokuzonwabisa yezakhiwo kunye namafulethi, amagumbi okudlala kwi-kindergartens, iiklasi zesikolo, izilwanyana zaseyunivesithi, iofisi kunye nezakhiwo zoshishino. Olu hlobo lwezinto zokubhabisa izithambiso aludingi iindleko zemali kunye neendleko zabasebenzi, kodwa ludala umoya ococekileyo kwaye unika umoya omhle kubo bonke abawubonayo. Kodwa le njongo ephambili yimuphi umthendeleko, ngokukodwa, oqaqambileyo, ophakanyisiweyo kunye ochaphazelayo njengobuKristu bukaKristu.
Imibulelo yeKrisimesi kwimifanekiso eneenkondlo
Iimfesane ezimfutshane ze-SMS-iindwendwe kwiindinyana ezivela kwiKrismesi ka-2018 kubahlobo kunye nabalingane
Thumela ii-sms ezifutshane-mncoma ngoKhisimusi 2018 kwindinyana inokuba ngabahlobo, intombi, abahlobo, abasebenzisana nabo kunye nabamelwane kwivolda eliphakathi. Aba bantu baya kuxabisa ihlaya elihle kunye nehlekisayo, ehlekisayo. Kodwa ukuba uhambe kakhulu kwaye ubhale amathekisthi aqhelekileyo okanye angabonakaliyo akufanelekanga. Nangona kunjalo, iKrisimesi ngokuyinhloko iholide yenkolo, eyazinikela kwiMangaliso kaThixo kunye nokuza kwiLizwe loMsindisi woluntu. Oku kufuneka kukhunjulwe xa ukhetha izinkondlo zokuvuyisana. Iimpawu ezivakalisileyo zifanele zandile zivuya kwaye ziqulethe imbeko yeeholide kunye nezifiso zempilo enhle, uxolo kunye nokuchuma, ukuthula phakathi kwendlu, ulonwabo olukhulu kunye nokuqonda phakathi kwentsapho. Kuyafaneleka ukuxhasa umsebenzi weenkondlo ngamagama amaninzi ukusuka kuwe. Baya kunika umqondiso omncinci wokubamba iqhosha lomntu kunye nokuyenza ibe nethemba ngakumbi kwaye linandipha.
Imizekelo yeempazamo ezihlekisayo kwindinyana yokuvuyela abahlobo kunye nabo osebenza nabo kwiKrisimesi
IKrismesi yafika endlwini yakho, Inwaba yachitheka! Makhe amomotheka, Kodwa ke ndinqwenela wena: Ububele nobuhle, Ukuze onke amaphupha agcwaliseke, Makube nempilo engaphumeleli, Yaye inhlanhla iyahamba!
NgeKrisimesi Ndikunqwenela ukubhiyozela iholide ngaphandle kokukhathazeka. Ndiyanincoma ngokwenene! Vumela yonke into ihlale inenhlanhla.
Ndiyakuvuyela iKrismesi, ndifuna ukuba iintsikelelo eziphakamileyo zihlale ziphela, Musa ukulibazisa "kamva", Oko umphefumlo ngoku uwufuna.
Iifom ezimfutshane kunye ezimnandi ngeKrisimesi 2018 - ndivuyisana nabathandekayo
I-Optimistic, iifom ezimfutshane kunye ezimnandi ngeKrismesi 2018 zifanelekile njengenyongezo eyongezelelweyo yabathandekayo kunye nabathandekayo. Iindwendwe ezinkulu zeeholide, ngokuqinisekileyo, kukulungele ukuthetha kwintlanganiso yomntu, kunye nomyalezo omfutshane obhaliweyo oqulethelwa uKrisimesi kunye nomfanekiso obalaseleyo uthunyelwa njengawo, ukususela kwinqwenelo kwakhona ukukholisa umhlobo osondeleyo okanye othandekayo. Eyona nto intle, ethintekayo kunye ephakamileyo iyanconywa ngo-prose kufuneka izinikezelwe kubazali, oogogo nomkhulu kunye nezinye izihlobo okanye abantu abaqhelana nabo, kwaye uthumele izibongo ezivuyayo kunye nethemba kumalungu omphefumlo wakho, abahlobo abadala, abantwana, abazalwana kunye noodade. Iimpawu ezincinane ezinjalo zihlala zixabiswa kakhulu kwaye zifudumala iintliziyo zabo ixesha elide kunye nokunyaniseka kwazo kunye nokulula.
Imizekelo yeempendulo ezimfutshane, ezintle zivuyisayo ngeKhisimusi 2018
Yenza iKrisimesi ngokukhawuleza. Ummangaliso. Musani ukoyikisa! Esihlambeni kukhanya ukukhanya okuhle kwaye ihlabathi liya kukhanya ngokuphendula!
Esibhakabhakeni inkwenkwezi yokuqala yayivuliwe - ithetha umzuzu oqaqambileyo, uKristu wazalwa! Ndiyakuvuyisela ngeKrisimesi kwaye ndifuna ukuba namhlanje kusihlwa kwaye iingcinga zakho zihlala zicacile kwaye ziqaqambile, njengeqhwa elikhanyayo ngaphandle kwewindow!
IKrismesi iza namhlanje kuthi - Kuyo yonke indlu iya kubomi bendalo. Ndiyakuvuyela kwaye ndinqwenela ulonwabo, Uvuyo oluninzi, uthando olukhulu nothando.
Iifesi zeKrisimesi ziRashiya kwiKrismesi-2017. Imibhalo kunye namanqaku eengoma zeKrisimesi kunye neefoto ezincinci zezingane
IKrisimesi yamaKrismasi 2015: ukuthokoza ngokunyanisekileyo kwindinyana kunye neprose
Iimpawu zeKrisimesi kunye neKrisimesi ngo-6 ukuya ku-7 kuJanuwari
Isiko se-Mythology ye-World-maple
Indlela yokufezekisa ubuhle bemvelo yamashi kunye nomlo wazo?
Amabhavu amadaka kunye neeparele
Ziziphi iintyatyambo ezinika intombazana
Yintoni ukupheka ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ngoFebhuwari 23, iipespe zokupheka ezona zifanelekileyo
Indlela yokudala isaladi ekhanyayo kunye nomkhwa wenyama?
Ukuphuhlisa iimvakalelo kubantwana
Ugqirha u-Oleg Menshikov, yakhe imbali
Ukujongana neMasking Masks